Pejy fandefasana loko telo refy Download sy loko maimaim-poana
Modely endrika telo-habe
Ny endrika géomèty dia nipoitra indray tamin'ny matematika ary koa namorona singa fototra amin'ny famolavolana kanto. Satria afaka mamorona sanganasa kanto miaraka amin'ny endrika geometrika tsotra sy endrika geometrika ihany koa ianao na aiza na aiza amin'ny fiainana andavanandro. Lasa mampientam-po indrindra ho an'ny ankizy izany rehefa manandrana manao ireo endrika telo-telo ireo ianao.
Ho an'ireo endrika geometrika manaraka, ny fifantohana dia ny fijerena ny habaka amin'ny 3D. Raha avelanao handoko ny ankizy amin'ireto endrika manaraka ireto ny ankizy, dia ho hitan'ny ankizy fa mety misy sary fotsiny ireo endrika ireo, fa indraindray koa ho an'ny tena izy endrika tsy azo atao na ilusika optique ireo. Ny fikitihana ny rohy dia manokatra ilay pejy miaraka amin'ny maodely voafantina:
faribolana tsy azo atao telo-refy
telozoro tsy azo atao amin'ny 3D
Endrika 3D - toradroa
Diamondra telo refy
Tohatra telo refy
Tohatra misy vokany 3D aorian'ny aforitra
vatana telo refy
Ahoana ny fanaovana sary amin'ny lafiny telo